Magic Arch 3D (2020) | MM Movie Store
အားလုံးပဲ “Toy Story” ကာတှနျးကားလေးကိုသိကွတယျဟုတျ အခုဒီတဈခါကားလေးကိုလညျး Toy Story ဇာတျကားလေးကိုCo-Writer အနနေဲ့ရေးခဲ့တဲ့ ဇာတျညှနျးဆရာ Vasiliy Rovenskiy ကရေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ရနေသေတ်တဝါတှစေုပေါငျးပွီးနထေိုငျတဲ့ ရအေောကျမွို့လေးတဈမွို့မှာ အခွားငါးတှလေိုကိုယျခံပညာတှလေကေ့ငျြ့ရတာထကျပတျဝနျးကငျြကိုစူးစမျးလလေ့ာရတာကွိုကျတဲ့ ဒယျလျဖီ ဆိုတဲ့လငျးပိုငျလေးတဈကောငျရှိပါတယျ။
တဈနမှေ့ာ ဒယျလျဖီနဲ့သူငယျခငျြးဖွဈသူငါးလေးဟာ ရအေောကျထဲထိမွုပျနတေဲ့ခံတပျဟောငျးကွီးတဈခုဆီဝငျသှားမိဖို့အကွောငျးဖနျလာပါတယျ။ ခံတပျကွီးထဲမှာသတ်တဝါတဈကောငျရဲ့နာမညျကိုပွောလိုကျရုံနဲ့ ထိုသတ်တဝါပုံပွောငျးသှားစမေယျ့ မှျောဝငျမုချဝတဈခုကိုတှခေဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့အနီးအနားမှာလညျး ငါးမွို့တျောကိုသိမျးခငျြတဲ့ငါးရှဉျ့တှကေအဲဒါကိုမွငျသှားကွပါတယျ။ တာဝနျသိတဲ့ဒယျလျဖီဟာ မွို့တျောဝနျကိုမှျောမုချဝအကွောငျးပွောဖို့ပွနျလာခဲ့ပမေယျ့ မွို့အဝငျဝကအစောငျ့တှဟော စကားဝှကျမပွောနိုငျတဲ့ဒယျလျဖီ့ကိုဝငျခှငျ့မပေးလို့မုချဝကွီးရှိတဲ့ဆီကိုပွနျသှားတဲ့အခါမှာ . . .
သူတှလေို့ကျရတဲ့မွငျကှငျးကတော့……ဒီကားလေးက ကွညျ့လကွေညျ့လဇောတျရှိနျတကျလလေပေါပဲ အစပိုငျးမှာအနညျးငယျဇာတျအေးသလိုရှိပမေယျ့ ဇာတျလမျးအလယျနဲ့နောကျဆုံးမှာတော့ ရှကေို့ဘာဆကျဖွဈမယျမသိပဲစိတျဝငျတစားကွညျ့ရမှာဖွဈပွီး
လြှို့ဝှကျခကျြလေးတှလေညျးပါဝငျလို့အပငျြးပွစေမေယျ့ ဇာတျကားလေးဖွဈတဲ့အပွငျ ကလေးငယျလေးတှလေညျး အကွိုကျဖွဈစမေယျ့ Animation Movies လေးမို့တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
အားလုံးပဲ “Toy Story” ကာတွန်းကားလေးကိုသိကြတယ်ဟုတ် အခုဒီတစ်ခါကားလေးကိုလည်း Toy Story ဇာတ်ကားလေးကိုCo-Writer အနေနဲ့ရေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဆရာ Vasiliy Rovenskiy ကရေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရေနေသတ္တဝါတွေစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့ ရေအောက်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အခြားငါးတွေလိုကိုယ်ခံပညာတွေလေ့ကျင့်ရတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရတာကြိုက်တဲ့ ဒယ်လ်ဖီ ဆိုတဲ့လင်းပိုင်လေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ဒယ်လ်ဖီနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူငါးလေးဟာ ရေအောက်ထဲထိမြုပ်နေတဲ့ခံတပ်ဟောင်းကြီးတစ်ခုဆီဝင်သွားမိဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ ခံတပ်ကြီးထဲမှာသတ္တဝါတစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ကိုပြောလိုက်ရုံနဲ့ ထိုသတ္တဝါပုံပြောင်းသွားစေမယ့် မှော်ဝင်မုခ်ဝတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အနီးအနားမှာလည်း ငါးမြို့တော်ကိုသိမ်းချင်တဲ့ငါးရှဥ့်တွေကအဲဒါကိုမြင်သွားကြပါတယ်။ တာဝန်သိတဲ့ဒယ်လ်ဖီဟာ မြို့တော်ဝန်ကိုမှော်မုခ်ဝအကြောင်းပြောဖို့ပြန်လာခဲ့ပေမယ့် မြို့အဝင်ဝကအစောင့်တွေဟာ စကားဝှက်မပြောနိုင်တဲ့ဒယ်လ်ဖီ့ကိုဝင်ခွင့်မပေးလို့မုခ်ဝကြီးရှိတဲ့ဆီကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာ . . .
သူတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့……ဒီကားလေးက ကြည့်လေကြည့်လေဇာတ်ရှိန်တက်လေလေပါပဲ အစပိုင်းမှာအနည်းငယ်ဇာတ်အေးသလိုရှိပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအလယ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ ရှေ့ကိုဘာဆက်ဖြစ်မယ်မသိပဲစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး
လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေလည်းပါဝင်လို့အပျင်းပြေစေမယ့် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ကလေးငယ်လေးတွေလည်း အကြိုက်ဖြစ်စေမယ့် Animation Movies လေးမို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။